FAQ - Shenzhen ekhazimulayo Technology Co., Ltd.
LCD vs Direct Buka LED Isiqophi Izindonga: What You Need to Know
Uma use emakethe ngoba uhlelo ngeso, mhlawumbe uke wathola ukuthi isiqophi odongeni ekhombisa ziza ububanzi ezididayo, ezinobukhulu, kanye nobuchwepheshe. Ungase uye waphawula ukuthi abakhiqizi abaningi zisebenzisa amagama ehlukene ubuchwepheshe efanayo futhi enze izimangalo engqubuzanayo mayelana nokuthi iziphi izinhlelo ubuchwepheshe wenza okungcono.
Kuyaqondakala ukuthi lokhu kungadala eziningi ukudideka kubathengi. Kubantu abaningi, elinye iphuzu elithile ukudideka umehluko phakathi ezimbili ukubonisa izinhlobo ethandwa: "LCD" (ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi "LED-LCD") futhi "LED" (ngezinye izikhathi ebizwa ngokuthi "Direct Buka LED"). Nakuba bengase iyefana, LCD futhi okuqondile Buka LED kukhona ezimbili ezingafani isibonisi ubuchwepheshe izici zawo siqu esiyingqayizivele kanye nezinzuzo. Ngakho, iziphi lezo zinzuzo? Uyini umehluko? Uma udonsa kanzima ukuba leyo mibuzo iphenduleke, silapha ukusiza!
LCD (okucaciswe luketshezi) kuyinto flat panel ukubonisa uhlobo bekulokhu ethandwa iminyaka kuzo zombili odongeni isiqophi kanye zabathengi electronics izimakethe. Kungenzeka ukuthi usuvele usebenzisa LCD ubuchwepheshe izikhathi eziningana ngosuku - kungcono isibonisi uhlobo esetshenziswa Smartphones iningi, ikhompyutha Abaqaphi, izikrini zethelevishini.
LCD panel yakhiwa ungqimba crystal liquid sandwiched phakathi ezimbili izingcezu ingilazi athuthukisiwe. crystal liquid kuyinto into ogeleza efana uketshezi kodwa has molecule kungenziwa ngamakhasimende like zinhlayiya. Lapho i kagesi lisetshenziswa zinhlayiya ketshezi, zinhlayiya shift, ukuvumela ukukhanya kudlulele ngalé ukudala isithombe. zinhlayiya Liquid musa ukukhiqiza ukukhanya yabo, ngakho backlights ahlelwe ngemuva ingilazi ukukhanyisa isibonisi. LED (diodes ukukhanya-likhipha) yiwona owande kakhulu kwasemuva esetshenziswa namuhla, futhi abanye abakhiqizi ukumaketha LCDs zabo LED-backlit ngokuthi "LED-LCD."
LCDs igqamile, ezingabizi, zinokwethenjelwa, futhi unikeze kakhulu ukusebenza ezibukwayo. LCD kuyinto ubuchwepheshe kakhulu high-resolution, ngakho -LCD isiqophi izindonga Ungabonisa umbhalo, izithombe, kanye namavidiyo ngokuningiliziwe abukhali. Lezi izinzuzo ukwenza LCDs kukho olukhulu uhla isiqophi odongeni izicelo, kusuka yezempi ukulawula amakamelo ukuba izikhungo iriseshi yaseyunivesithi.
Lapho LCDs kuthiwa tile ndawonye ukudala odongeni ividiyo, bezels (noma ezivuzayo) abonakala phakathi panel ngabanye. Lokhu kungabonakala njengoba kusimo lapho eqhathanisa LCD ukuba Seamless ukubonisa izinhlobo efana ngqo Buka LED. Nokho, abakhiqizi abanciphisa bezel-ububanzi nge njalo isizukulwane esisha ubonisa, ngakho uzothola ukuthi bezels ku LCDs entsha ye kukhona lubonakale ingasaphathwa.
Buka ngqo LED
Njengo-LCD, i-Direct Buka LED (ezibuye zibizwe "LED") is a flat-panel Uhlobo lokuboniswa ezihilela ukusetshenziswa diodes ukukhanya-likhipha (LED). Nokho, i-Direct Buka LED iyehlukahluka kakhulu LCD. Ku-Buka Direct LED ukubonisa, amakhulu LED amancane zixhunywe ngqo iphaneli, futhi akukho crystal liquid noma ingilazi athuthukisiwe isetshenziswa. Kunalokho lokukhonza njengenceku kwasemuva (like benza esihogweni LCD ekhombisa), i-LED Direct Buka LED ekhombisa ukukhiqiza izithombe ngokwabo. LED ngamunye kusala ingilazi encane ukukhanya ukuthi likhipha ukukhanya anemibala lapho voltage ethile isetshenziswa kuwo. Amahlukuzo LED obomvu, oluhlaza, futhi okwesibhakabhaka ziqoqwa ku iphaneli, ukudala ama-pixels esigcwele umbala odingekayo ukuze kuvezwe isithombe.
Direct Buka LED yake aphansi-isinqumo Uhlobo lokuboniswa isetshenziswa ngokuyinhloko giant ekhombisa ongaphandle, kodwa ukuthuthukiswa LED ezincane eminyakeni yamuva baye benza izinqumo kakhulu kunalokhu kungenzeka. Lezi kwentuthuko kuyo nawo aye asho Direct Buka LED inketho entsha ethokozisayo zasendlini isiqophi izindonga.
Buka ngqo LED panel abanalo bezels, ngakho kungenziwa tile ndawonye ukuze zakhe ubuzalwane ngokuphelele Seamless isiqophi udonga . Ukubonisa LED futhi elikhanyayo kakhulu, ethembekile, eyongayo, futhi ube ezikahle kakhulu ekwenzeni umbala ukunemba ngiqabule amazinga anoma yiluphi uhlobo ukubonisa atholakalayo namuhla. Lezi zimfanelo zibenza Direct Buka LED i choice omuhle ngoba emikhulu izimpawu digital nezinye izinhlelo zokusebenza ledzinga anomthelela Okubonwayo.
Nakuba amanani kulindeleke ukuthi yehle phezu eminyakeni ezayo, ephezulu isixazululo LED izindonga njengamanje izikhathi eziningana eqolo ngaphezu kwanoma LCDs, ngakho lobu buchwepheshe namanje ukuzamukela amakhasimende kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ngisho eliphakeme zokulungiswa LED ekhombisa abasuke bengakakwazi ukusebenzisa ukunikeza izinqumo ultra-high kuyatholakala kusuka LCD. Ukuze isetshenziswe-izimo ezidinga ukunakekela imininingwane abachwepheshile, LCD ekhombisa kusengenzeka ukuthi ayethanda.
Sithemba Usize aveza okuthile ukukhanya oku umehluko - kanye nezinzuzo ezivamile - we-LCD futhi okuqondile Buka LED isiqophi izindonga. Ekugcineni, bobabili zinhle kakhulu ukubonisa ubuchwepheshe, futhi kuphela isicelo sakho ethize futhi isabelomali kungacacisa ukuthi ukhetho kangcono.